Amaphupho ngesimo sezulu nesibhakabhaka – iAfrika
Asho ukuthini amaphupho amayelana nesimo sezulu kanye nesibhakabhaka? Lokhu kuhlanganisa amafu, izikhukhula, isithwathwa, isichotho, inkungu, imvula, uthingo lwenkosazana, isivunguvungu, ukukhanya kwelanga, umoya, inyanga, izinkanyezi kanye nelanga.
Lokhu kusho ulaka lwabaphansi (amadlozi), kukhona osuke ukwenzile noma kwenzekile…
Uma uphupha ubona amafu, incazelo iya ngokuthi awumbala onjani lawomafu…
Ukuphupha ilanga liphume ngokugqamile Kusho ukuthi uyofunda okuthile okusha okuyoshintsha…
Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi…
Uma uphupha uvaleleke enkungwini kuyishwa. Inhliziyo yakho izohlukunyezwa ngokushesha ngothile…
Uma uphupha ubona inyanga kusho ukuthi uzophumelela ngesikhathi ungalindele, ikakhulukazi…
Uma uphupha ubona iqhwa incazelo iya ngokuthi wena ungubani. Kubalimi…
Amaphupho ngesangqumba achaza izinto ezahlukahlukene kubantu abahlukahlukene, kodwa wonke achaza…
Uma uphupha ubuka isibhakabhaka ngokujwayelekile kuwuphawu oluhle. Uma sicwathile futhi…
Uma uphupha ukuthi kube nesichotho kusho izinto ezimbi ekusaseni lakho….
Uma uphupha ubona isithwathwa kusho ukuthi uzobhekana nesilingo kungekudala. Qaphela…
Uma uphupha ukuthi kunesivunguvungu kuwuphawu lweshwa kuwe futhi kufanele uqaphele…
Amaphupho ngezikhathi zonyaka
Uma uphupha ukuthi intwasahlobo isifikile ngesikhathi kusengesinye isikhathi sonyaka kusho…
Uma uphupha ukuthi kade kunesikhukhula kusho ukuthi uyoba nenhlanhla futhi…
Uma uphupha ukuthi izinkanyezi ziyakhanya uyoba nothando oluningi empilweni yakho…
Amaphupho ngokukhanya kwelanga
Uma uphupha ukuthi kunelanga futhi kumnandi kusho ukuthi uyoba nenhlanhla….
Uma uphupha kunomoya incazelo iya ngokuthi unamandla kangakanani. Umoyana usho…
Amaphupho ngothingo lwenkosazana
Uma uphupha ubona uthingo lwenkosazana kusho izinto ezinhle empilweni yakho….
Amaphupho ngomoya ohamba endaweni eyodwa (isikhishikizane) ayinto engekho yinhle neze….
Tags Isibhakabhaka, Isimo sezulu, Izulu
3 thoughts on “Amaphupho ngesimo sezulu nesibhakabhaka”
Uma uphupha ubona eminye imihlaba esbhakabhakeni kusemini.
Noku0hupha ubuke izithonve esibhakabhakeni kusebsuku kwaze kwehla u cheese khona esbhakabhakeni
Uma uphupha unethwa imvula uphethe amafon eyodwa ifuna ukuwa bese uzamzama ukuyyibamba Ecelen kunomfula omkhulu owehlayo abantu bayabhkuda khona ekugcineni kwawo uyabuya angazuthi kuyirace kunabantu abagade ukuthi ungaminimzi lomfula unamaramp owajumpayo ngangena nami ngaze ngafika ekugcineni wangibuyisa ngabuya sengijabule nobhuty bam bejabule ngabe kuchazan
14/12/2020 at 09:39
Nalu ulwazi esinalo ngaleli phupho https://iafrika.org/amaphupho-ngokubhukuda/